Variosystems ၏ Osprey လိုင်း - ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကဒ်များ။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » Variosystems '' Osprey လိုင်း: ဗီဒီယို Capture အကဒ်များ, မည်သူမဆို?
Variosystems ထင်နှင့်အကောင်းဆုံးစနစ်နှင့် Logistic ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု andsupport ကွန်ယက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုမူတဲ့ခေတ်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်းမိမိတို့၏နှိမ့်ချစသူတို့က client များ 'ဖို့သန္နိဋ္ဌာန် 100% ကြောင်းနိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုပြသ အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးလိုအပ်ချက်များကို။
လမ်းကိုပြန် 1922 အတွက်ဗိုလ်ချုပ် (အငြိမ်းစား) ဂျော့ခ်ျ Owen Squire (ပါရဂူဘွဲ့) ရိုးရာကျော်လွှားလက်ရှိလျှပ်စစ်လိုင်းများကျော်ကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖောက်သည်ကြိုးရေဒီယိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆက်စကား (Muzak သို့ပြောင်းလဲတစ်ဒါဇင်နှစ်ကြာပြီးနောက်သော) နှင့်အတူ streaming များဘောလုံးကိုလူးစတင် ရဒေီယို။ နှစ်ပေါင်းလွန်။ ထို့နောက်ကွန်ပျူတာအသက်အရွယ်နေထွက်တော်မူ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပိုပြီးအများအပြားဆယ်စုနှစ်လွန်ပြီးနောက်, စီးပွားရေးအရဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်မီဒီယာအဖြစ်ပြောင်းလဲနှင့်ပြသရန်နည်းလမ်းနှစ်လယ်ပိုင်း-to-နှောင်းပိုင်းတွင် 1980s ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လက်တွေ့ကျတဲ့ PC များ၏ထွန်းမီဒီယာ streaming ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့သည် ... နည်းပညာအစောပိုင်းကိုးဆယ်အသုံးပြုပုံခေတ်မီခေတ် streaming များစတင်ခဲ့ကြောင်းအလုံအလောက်နောက်ဆုံးတော့အဆင့်မြင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုးတက်လာသောကွန်ယက် access ကို, စီးပွားကူးသန်း၏တွန်းအား, အလွန်-တိုးချဲ့ကွန်ယက်ကို bandwidth ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သို့ကိုအသာပုတ်အားကြီးသောဒီဂျစ်တယ်မြစ်သို့သတင်းအချက်အလက်များ၏ချစ်စရာနည်းနည်းစီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကူညီပေးခဲ့သည်။
Osprey 800a အသံကဒ်
1993 ခုနှစ်, သုံးလူသအဖွဲ့သည်ဆွစ်ဇာလန်အတွက် Variosystems တည်ထောင်ခဲ့ပြီး; ဒီသုံးပိုင်ရှင်များနှင့်ပူးတွဲ CEO ဖြစ်သူရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်း။ တစ်ဦးတာဝန်ယူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်းနစ်ဝန်ဆောင်မှုသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျူးလွန်ကုမ္ပဏီ, န်ထမ်းများနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ် - သူတို့က astraightforward ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့သည်။ 1998 1999 အတွက်သူတို့က USA တွင် Dallas ရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့ထူထောင်နှစ်ထောင်ခြောက်ဦးတို့ကသူတို့မှာလည်းဟန်ကျိုး, တရုတ်အတွက် Zhejiang ပြည်နယ်၏မြို့တော်အတွင်းတည်နေရာတစ်ခုဝယ်ယူ, ၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်သီရိလင်္ကာမှာတော့ Badalgama သို့တိုးချဲ့ကိုမြင်တော်မူ၏။ ထို့နောက်သူတို့ကတိုးချဲ့နှင့်ထိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သူတို့ရဲ့အနေအထားကိုခဲ။ ယနေ့သူတို့ဤလူမျိုးတို့ကို၎င်းတို့၏အစိမ်းရောင်က်ဘ်ဆိုက်များမှာ 1100 န်ထမ်းကိုကျော်ရှိသည်။
2014, Variosystems ရယူ၏မတ်လမှာတော့ Osprey ဗီဒီယို နည်းပညာ - နောက်ကျောခေတ်သစ် streaming များ၏အစအဦးအနီးအပါးမီဒီယာလမ်း streaming အတွက်အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်စံသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းကုမ္ပဏီ၏။ အဘယ်သူမျှမကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှိသည်! ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးကဗီဒီယိုရိုက်ကူးကတ်များ၏စီးဆင်းမှုကိုလျော့ရမည်မဟုတ်! Variosystems အဆိုပါထိန်းသိမ်းခြင်းမှကျူးလွန်နေသည် Osprey ဗီဒီယို ကတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းဖမ်းယူပါ။ သူတို့ရဲ့လက်ရှိကဒ်များအောက်ပါလေးကတ်များအပြင်ကိုလည်းတိုင်းစိတ်ကူးဗီဒီယိုရိုက်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, ဆယ်ခုနစ်ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုရိုက်ကဒ်များမှစုစုပေါင်းဆောင်ခဲ့ 2015 အတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဇန်နဝါရီလ 15 တွင်th 2015 သည် Osprey 815e (တစ်ခုတည်းသောရုပ်သံလိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ဖမ်းမိ) နှင့် Osprey 821e (စွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်ကို dual ရုပ်သံလိုင်း HDMI ဖမ်းယူ) ကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည် ဖေဖော်ဝါရီလ 15 အပေါ်th 2015 သည် Osprey 811e (တစ်ခုတည်းသောရုပ်သံလိုင်း HDMI ဖမ်းမိ), နောက်ဆုံးတော့ 15 မတ်လအတွင်းနောက်တော်သို့လိုက်th အဆိုပါ Osprey 2015e (dual-channel တစ်ခုနဲ့ 827 HDMI/ DVI Analog စ / ဒစ်ဂျစ်တယ် SD က /HD ဖမ်းယူ) - အပေါငျးတို့သ Osprey ထုတ်ကုန်လိုင်းမှဆက်ပြောသည်။
လူမှုရေးမီဒီယာကနေ streaming တောင်းဆိုချက်များကိုတိုးမြှင့်လည်းပင်နောက်ထပ်တလျှောက်ခေါ် ( "စစ်မှန်တဲ့ streaming များ") တိုက်ရိုက်လွှင့်လှုံ့ဆျောကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ဒီသင်တန်းသားအပေါငျး streaming applications များ, ပါဝင်ပါဘူး; အရာအားလုံးလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သစ်ကိုမဖွစျနိုငျသညျ။ video capture ကတ်များခေတ်သစ် streaming များတော်လှန်ရေးအခြားအဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရပြီနှင့် Osprey ကတ်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသံနှင့်ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကိုကယ်နှုတ်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ အသံလွှင့်နဲ့ Analog နှင့် high-definition ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းရင်းမြစ်ကိုဖမ်းယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအဲဒီလယ်ကွင်းများအတွက်, Osprey ကတ်များတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထင်ရှားပြကြပြီ။ တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံလိုင်းများကိုရယူသုံးခြင်းရှိမရှိ, အ Osprey ထုတ်ကုန်လိုင်းကိုသင်လိုအပ်ကဒ်များရှိပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုအလွယ်တကူအသုံးဝင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ပြည်နယ်မှ Analog စပြောင်းလည်းတိုးပွားလာတလျှောက်တွန်းအားပေးကူညီ HD တောင်းဆိုချက်များကို။ streaming များနှင့်အခြားဖြစ်ပေါ်နေသောနည်းပညာများ၏ထုတ်လွှင့်အသိုင်းအဝုိင်းရဲ့ထွေးပွေ့အမှန်တကယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကဒ်များ Variosystems '' Osprey လိုင်းဘောလုံးကို၏ Belle တူသောစွယ်စုံ devices များပြီ။
သင့်ရဲ့စတူဒီယိုရဲ့အထူးသဖြင့်နယ်ပယ်သင်လိုအပ်မည့်ဖမ်းယူကတ်များ dictate ပါလိမ့်မယ်: မျှမျှတတသို့မဟုတ်သည်ညီမျှမှုစတီရီယို, HDS-ကဗီဒီယို - ဖြစ်ကောင်းတဲ့အနိမ့်ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူ?
Osprey 460e Analog စ
တစ်ဦးဖမ်းမိကဒ်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်မဆိုပြဿနာသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်, Variosystems '' Osprey လိုင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအနိုင်ရပုံသေနည်းမရှိဘူးလျှင်သင်တစ်ခုခု၏ 400,000 ကျော်စေပါဘူး။ Variosystems ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနဂိုအတိုင်းကျန်ရှိနေဆဲဘို့ Osprey ရဲ့အစဉ်အလာရေးအတွက်, ကဒ်ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအားလုံးအဆင့်ကျော်အကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤကဒ်များအားလုံးသက်ဆိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ကိရိယာများအားနှင့်စစ်ရေး applications များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများတွေ့ဆုံအားဖြင့် ပို. ပင်တောင်းဆိုမှုများသည် broadcast အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်များထက်စံတွေ့ဆုံရန်။ အဆိုပါနယ်ပယ်များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများအချိန်များတွင်ကြောင့်ဘဝနှင့်သေခြင်းအကြားပကတိခြားနားချက်င်ကြောင့်ထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအထွတ်မှာဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ဤသည်စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်ထိန်းချုပ်မှု Analog စကနေဒစ်ဂျစ်တယ်, တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်မြင့်မားသိပ်သည်းဆဖမ်းယူဖို့, အချိန်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်များအတွက် '' ပျော့သွားတာကို '' ၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူဖောက်သည်-တိကျတဲ့ထုံးစံ configurations များအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
PCI & PCI-X ကိုများအတွက် Osprey အမွေအနှစ်စီးရီးအချိန်စမ်းသပ်မှုရပ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်တော်မူပြီ ဤကဒ်များသူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ စတူဒီယိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြီးပြည့်စုံသောဖမ်းမိဘို့ဤဖြေရှင်းချက်ရွေးကောက်တော်မူပြီအမှတ်စဉ်ဘတ်စ်ကားဗိသုကာကျော် NTCS နှင့် PAL Analog စသည်ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဘို့မိမိတို့အဖြေဖြစ်။ အဆိုပါ Variosystems '' Osprey အင်နာလော့စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် PCLe ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည်ထွက်ရှိသောပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးအပေါ်ပြီးပြည့်စုံသော Analog စဖမ်းဘို့အကိုက်ညီနေသည်။ ဤရွေ့ကားကတ်များအစိတ်အပိုင်း, ပေါင်းစပ်ခြင်း, S-ကဗီဒီယိုအပါအဝင်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှ NTCS နှင့် PAL ကဗီဒီယိုသွင်းအားစုနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ Osprey SDK ကိုဖောက်သည်လျှောက်လွှာပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် PCLe ဖမ်းယူကဒ်များ Variosystems '' Osprey 800 စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကနေ high-definition ဖမ်းခွင့်ပြုခြင်း, ခေတ်သစ်မြန်နှုန်းမြင့်ကို PC ပလက်ဖောင်းအတူလုပ်ကိုင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OEM အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ 800 စီးရီးကတ်များရှိသမျှတို့သည်အံ့သြလောက်အောင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်Simulstream®နည်းပညာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားတဲ့လာကြ၏။ Simulstream®ဆော့ဝဲနည်းနည်းနှုန်းထားများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ရင်တောင်တစ်ခုတည်း Osprey ဖမ်းဘုတ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသံနှင့်ဗီဒီယိုအတော်ကြာစီးဝှက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆော့ဖျဝဲ၏ဤနေရာလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ထဲ၌မြင့်အသံအတိုးအကျယ်အသုံးပြုသူတွေနဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
Simulstream နှင့်အတူ Osprey 530
ဤအ Top-of-the-line ကိုဖမ်းယူကတ်များတစ်ခုချင်းစီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အသုံးပြုမှုရှိပါတယ်; အဆိုပါ Osprey လိုင်း (အ 845e, 460e, နှင့် 440) မှသုံးကတ်များလေးလွတ်လပ်သော streaming များ channel များကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုဖမ်းယူ! Channel ကိုဖမ်းယူသောအရာကိုပြုလုပ်နိုင် ... , သင်တန်း, ဇာတ်လမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတခုသာဖြစ်တယ် do အဲဒါကိုရှိပါတယ်တစ်ချိန်က? ဘာစွမ်းရည်ကို enable သနည်း? high-သိပ်သည်းဆ encoding က applications များ Osprey ကတ်များကိုချစ်။ ဒီအလှည့်အတွက်, ချောမွေ့ကူညီပေးသည်, ပြီးတော့်ဖြေရှင်းချက်မှဦးဆောင်သည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ, လွယ်ကူချောမွေ့။ nice! , de-ချုံ့ကဲ့သို့သောအရာများကိုအများအပါအဝင် rendering ထိုသရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုအတူ fiddling တစ်လိုဂို / bitmap ပြသမှုအပေါ် positioning ကိုနှင့်လင်းမြင်သာမှုပြောင်းလဲပစ် - ဤကတ်များ၏အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျ access ကို pre-အပြောင်းအလဲနဲ့ features တွေနဲ့တူသောအရာတို့ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်အရာအားလုံးသည်အမျိုးမျိုး! , အသုံးဝင်သောအလားအလာအမြတ်အစွန်း, ငါ, ပျော်စရာလို့ပြောဝံ့။ ဒီနေ့အစဉ်စွဲနည်းပညာများပြောင်းလဲနှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့်အတူ, ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်း ပို. ပို. အရေးပါလာ; ကြောင်းအတွက်ဝိညာဉ်တော်သည် Osprey Card များကိုထိုကဲ့သို့ဗီဒီယိုက input ကို format နဲ့ရုပ်ရှင်ဘောင်နှုန်းထားများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြောင်းလဲသွားသည့်အခါအဖြစ်အများအပြား On-The-ပျံသန်း-အပြောင်းအလဲထားရှိရန်လျင်မြန်စွာပွုပွငျပွောငျးလဲနိုငျသညျ။
ယင်းထုတ်လွှင့်ဘို့, Osprey ထုတ်ကုန်လိုင်းပြီးသားဗီဒီယိုရိုက်ကူးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဖြစ်က၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာတသမတ်တည်းဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း၏သင်တုန်းအချက်အနေဖြင့်ထုတ်ကုန်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ Osprey လိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်, နဲ့ Hard အလုပ်လုပ်တယ်; တကယ့်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့င် - သင်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဖမ်းယူကဒ်ချင်လျှင်, သင်တစ်ဦး Osprey ချင်တယ်။ ဤရွေ့ကားကတ်များကို Windows နှင့် Linux ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအလွယ်တကူသဟဇာတများမှာ - နောက်ဆုံးပေါ်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်အတူ။ မစ်ရှင်-အရေးပါ application များအတွက်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နေတဲ့အသံလွှင့်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် Osprey ရဲ့အနီးသို့-ဒဏ္ဍာရီစံချိန်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Variosystems Osprey ဝယ်ယူတဲ့အခါသူတို့ကဆက်လက်ထုတ်ကုန်ထူးချွန်အာမခံဖို့အစီအမံကို ယူ. ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအထူးကုနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ပညာရှင်များ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဝန်ထမ်းများနှစ်ဆတက်။ ရင်ပေါင်တန်းနေဖို့ဒါမှမဟုတ်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာဈေး၌ရှေ့ဆက်ရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနီးပါးတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, သင့်စတူဒီယိုတစ်ခုအစွမ်းထက်မဟာမိတ်နှင့်အစွမ်းထက် tools များလိုအပ်နေပါသည်။ Variosystems နှင့်၎င်း၏စဉ်းစားကြည့်ပါ Osprey ကဗီဒီယို ကတ်များကိုဖမ်းယူ။
Variosystems, Inc အကြောင်း
1993 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Variosystems, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 1,000 န်ထမ်းထက်ပိုရှိပြီး Southlake တက္ကဆက်ပြည်နယ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်သည်။ Variosystems ထင်နှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုမူတဲ့ခေတ်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအောင်မြင်သောရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသေချာစေရန်, တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုက၎င်း၏ client များပေးထားပါတယ်။ Variosystems သှေးသာလွန်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်မယ့် Win-Win အခြေအနေအပေါ် အခြေခံ. ။ အားလုံးက၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်များသည် SAP မှတဆင့် networked နှင့်အကောင်းဆုံးစနစ်နှင့် Logistic ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်နိုင်ကြပါတယ်။ Variosystems 20 နှစ်အတွင်းအဘို့ client နှင့်စျေးကွက်၏အတိအကျတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Variosystems စီးပွားရေးအရနှင့်နည်းပညာကောင်းစွာ-အင်ဂျင်နီယာကြောင်းအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်များနှင့်အရာရှုပ်ထွေးစနစ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Osprey®နှင့်SimulStream®အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် Variosystems, LLC နေဖြင့် Osprey ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
audio အသံလွှင်း ဂျော့ခ်ျ Owen Squire USA တွင်လုပ် Muzak Osprey ဗီဒီယိုနည်းပညာ Variosystems ဗီဒီယိုကို Capture အကဒ်များ 2014-12-28
ယခင်: ထုတ်လွှင့် Switcher: အဆိုပါဟောငျး Switcheroo ...
နောက်တစ်ခု: စွမ်းအင်ချွေ၏တစ်ဦးက New လိုင်းနှင့်အတူ LED ထုတ်ကုန်များ PrimeTime Lighting Systems က KW /2ယခင်၏အမွေအနှစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး